Shiinaha Shiinaha oo loo yaqaan 'Crystal Candy Jar' oo leh weel nadiif ah, Taangiga Kaydinta cuntada ee Quraaradaha, Dheriga Xilliga, Warshadda Kaydinta Qurxinta Hal-abuurka iyo Soosaarayaasha | Chuancheng
Crystal Candy Jar oo Liidata, Taango Cad oo Kaydinta Cunnida Glass, Dheriga Xilliga, Sanduuqa Kaydinta Qurxinta Hal-abuurka
Jarsooyinkani waxay u fiican yihiin keydinta buskudka, alaabada la dubay, ubax, sonkorta, cork, kubadaha suufka, iyo dhammaan cuntooyinka aad jeceshahay iyo kuwa fudud, iyo waxyaabo kaloo badan.
Quraacda quraaradani waxay ku habboon tahay qolka jikadaada, armaajooyinka, maqaayadaha kafateeriyada iyo miiska xafiiska.
Cabbirka ku habboon ee sanduuqa nacnaca ah ayaa kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho nacnaca, shukulaatada, buskudka, khudradda, tufaaxa iyo xitaa dahabka, adigoo ku daraya kala-soocid qurux badan oo qurxisa miisaska miiska dushiisa.
ISH 【GALASCAD CALANKA GLASS】 Lagu sameeyay muraayad hufan oo dhalaalaysa oo tayo leh, weelkan qurxan ee qurxan ee daboolan ayaa iftiimiya waxayna ka tarjumaysaa iftiinka saameynta cajiibka ah, ee ku habboon in lagu madadaaliyo asxaabta iyo qoyska.
ES 【QALBADII LATTICEAL LATIFIFESY design Naqshadeynta naqshadeynta leh wejiga 'nacnaca leh' waxay sameyneysaa qaanso nacnac iyo qurux badan. Daraasiin daaweyn ah oo gudahaaga ah ayaa u muuqda kuwa aad u fiican oo aan loo adkaysan karin. Ula dhaqan qoyskaaga iyo martidaada koob madadaalo ah saxan nacnac leh oo dhalaalaya, adiga oo u keenaya munaasabado xaflad ah nolosha.
Z 【Cabbirka qaab sax ah of Cabbirka habboon ee sanduuqa nacnaca ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u isticmaasho nacnaca, shukulaatada, buskudka, khudradda, tufaaxa, iyo xitaa dahabka, adigoo ku daraya kala-soocid qurux badan oo soo jiidasho leh qurxinta miis kasta.
US ISTICMAALKA BADAN】 Ku habboon adeegsiga shaqsiyadeed iyo munaasabadaha gaarka ah sida xafladaha aroosyada, soo-dhaweynta, makhaayadaha, fasaxyada iyo isu imaatinka qoyska, buffets iyo dhammaan noocyada xafladaha. Waxaa kale oo wanaagsan in loo isticmaalo hadiyad wanaagsan.
C 【CADDADA HALISTA】 Kaydinta Kaydinta Qarsoodiga ee Crystal ayaa ku habboon qurxinta arooska, guriga, iyo qurxinta beerta.
Hore: Nacnac nacnac
Xiga: Galaaska milixda 160ml iyo milixyada basbaaska
Dhalada milix ee Malaaska
Quraarado Maraqa saliidda karinta Dhalada dhalada leh oo ku shub milix ...
Nalalka milixda ee 120ml iyo Muraayadaha Shabaqa Muuqaalka w ...
Dhalada Nest Bird